How'd it happen and more reports?: အခြေခံကုန်ဈေးနှုန်းတွေတက်တာကို လူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့ခေါ်ပါသလား?
အမိမြေက၂၀၁၄ခုနှစ်က သြဂုတ်လက ကုန်ဈေးနှုန်း အဟောင်းတွေကိုလဲ ကြည့်လိုက်ကျပါအုံး..... ယခုလက်ရှိကုန်ဈေးနှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရအောင်....
ယှဉ်ကြည့်ရင်းနှင့် အံ့သြလောက်အောင် ဈေးနှုန်း ၂ဆ ၃ဆလောက်တက်သွားတာကို တွေ့ရလိုက်မယ်....
အများပြည်သူတွေ လစာတွေကော ၂ဆ ၃ဆလောက်တက်ပါသလားဟင်.....
ကန်စွန်းရွက်တောင် ၁ထောင်ဖိုး ၃စီးဘဲရတော့တယ်ကြားလို့ပါ...
(၁၉ ၈၄ ခုနှစ်တုန်းက ၁ကျပ်ဖိုးဝယ်ရင် အစီး၂၀ ရလို့ များလို့ မယူဘဲ ၁၀စီးဘဲယူဘူးတာကို သတိရလို့ပါ..
နောက်တရက်မှကျန် ၁၀စီးကို အကြွေးပြန်ယူဖူးတယ်ဗျ...၀ယ်နေကျဆိုတော့ ဈေးသည်တွေက ပေးတယ်လေ...
ဆန် တပြည်နှင့် ၀က်သားတပိဿမှ ၄၀ ကျပ် ဘဲ ရှိတာလေ...ရွှေဈေးလဲ ၁ကျပ်သားမှ၂၇၀၀ကျပ် လောက်ဘဲ ရှိတာလေ... ဒေါ်လာက ၄၀ကျပ် လောက်ဘဲရှိအုန်းမယ်)...ရတဲ့လစာလဲ ၃၀၀ကျပ်လောက်ဘဲလေ...ဒါတောင် ကိုယ်အဖိုးလုပ်ငန်းမှာဝင်လုပ်တာနော်.....
ဒီဈေးနှုန်းတွေကို ယခုခေတ်ခလေးတွေကို ပြောပြလိုက်ရင် လှောင်ခံရလိုက်မယ်.. ရီစရာဖြစ်နေတယ်...
ဒေါ်လာဈေးလဲတက် အစိုးရ၀န်ထမ်းလစာဆိုမယ်ဆိုလို့ ကုန်ဈေးနှုန်းတက်သွားလိုက်တာ...
ပြည်တော်ပြန်တွေလဲ သေတာဘဲ.... မှန်းချက်နှင့် ကိုက်တောင်မကိုက်တော့ဘူးဖြစ်သွားလောက်ပြီ....
အခု အောက်ဆိုဘာလမှာ ၁ဒေါ်လာ ၅၀ကျော်ကွာတာဆိုတော့ တွက်တာကြည့်တော့....
ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်လာတာလို့ လေကြီးနေသူတွေ ဘာကိုပြောတာလဲ မေးစမ်းပါရစေအုံး?
၂၀၁၀ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မရှိမဖြစ် နေစရာအိမ်ဈေးကလဲ အဆပေါင်း ၁၀၀ - ၃၀၀ လောက်တက်တာ ကုန်ဈေးနှုန်းလဲ ၂ဆ-၃ဆလောက် တက်နေရင် တော့ ဒါလား လူနေမှု အဆင့်အတန်းမြင့်လာတယ်ပြောတာလားဟင်?
၂၀၁၄ခုနှစ် သြဂုတ်လက ဈေးနှုန်းလေးနှင့် နိုဝင်ဘာလဈေး နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ပါ..
ဆီ (ပဲဆီ) (ပိသာ)
ကြက်သွန်ဖြူ (ရှမ်း) (ပိသာ)
ကုလားပဲ (၀ါ) (ပိသာ)
21-08-2014 1900 2500 1700 800 2500 2800 1700 4200 4000 3800 3500
21-08-2014 800 3500 2500 1500 2000 2200 1800 4200 3900 3800 3600
21-08-2014 3500 3700 1500 1000 2500 2700 1800 4000 4000 3500 3500